[OFFICIAL] dr.fone yamathuluzi --Android Data Isipele nokubuyisela esimweni: Khetha Exaport nokubuyisa
dr.fone yamathuluzi --Android Data Isipele nokubuyisela esimweni
Kalula ubuyisele Android Data
Khetha isipele idatha Android kwikhompyutha ngokuchofoza okukodwa.
Hlola kuqala bese ukubuyisela isipele kunoma iyiphi idivayisi ye-Android.
Usekela amadivayisi we-Android 8000+.
Nge dr.fone yamathuluzi --Android Data Isipele nokubuyisela esimweni, nokubuyisela idatha yakho Android akakaze eaiser.
dr.fone yamathuluzi --Android Data Isipele nokubuyisela esimweni ivumela ukuthi ucele kalula isipele cishe zonke izinhlobo idatha kuhlanganise ikhalenda, nomlando wekholi, indawo eyisitezi eholweni, ividiyo, imiyalezo, oxhumana nabo, alalelwayo, izicelo ngisho idatha yohlelo lokusebenza (amadivayisi ibangelwa). Ungase futhi uhlole bese ngokukhetha ukuthekelisa yiluphi uhlobo idatha ofuna. Uhlelo futhi ivumela ukuthi ucele kalula ukubuyisela idatha kudivayisi yakho noma nini udinga ukwenza njalo.
Isipele Android yakho nge One Click
dr.fone yamathuluzi --Android Data Isipele nokubuyisela esimweni ikuvumela isipele idatha kwikhompyutha in okukodwa nje ngaphandle ngaphezulu noma iyiphi idatha ekhona. Uhlelo futhi ikunika ikhono eliyingqayizivele ukubuka izinto ifayela yokusekelayo bese ukhetha zonke izinto noma ezinye izinto ofuna ukubuyisela.
Lula impilo yakho
Sebenzisa le isipele idatha Android ne ukubuyisela ithuluzi, ungakha isipele oluphelele yonke idatha kudivayisi yakho kanjalo ugcina idatha iphephile.
amafayela Isipele ngeke esikhundleni
Ungenza noma kunini isipele ufuna futhi wonke amafayela isipele avikelekile, futhi awukwazi ukwenziwa kabusha nganoma iyiphi indlela uma wenza ibhekhaphu Android.
ukubuka kalula okuqukethwe isipele Android ne ukubuyisela idatha ngokukhetha
Lokhu isipele idatha Android ne ukubuyisela isofthiwe ikuvumela ukuba uhlole imininingwane wonke amafayela isipele bese ukhetha amafayela ofuna ukubuyisela kudivayisi.
Isipele izinhlelo zakho zokusebenza nedatha lokusebenza
Ungasebenzisa lolu isipele idatha Android ne ukubuyisela isipele izinhlelo zakho zokusebenza nedatha lokusebenza (amadivayisi ibangelwa).
Londa idatha Android ku izinga lossless
Nale isipele idatha Android ne ukubuyisela uhlelo, ungaqiniseka awusoze ulahlekelwe noma iyiphi idatha kudivayisi yakho.
9 izinhlobo zamafayela asekelwa
I-Android isipele idatha futhi ubuyisele isofthiwe ingasetshenziswa ubuyisele oxhumana nabo, imiyalezo, nomlando wekholi, ikhalenda, igalari, umsindo, ividiyo, isicelo ngisho idatha yohlelo lokusebenza (nakuba amadivayisi bagxile kuphela)
8000+ amadivayisi asekelwe
Isekela amadivayisi ethandwa kakhulu-Android kuhlanganise Samsung, i-Sony, i-LG nezinye onobuhle kufika ku 8000. Uhlu liyaqhubeka likhula ngakho kungenzeka ukuthi idivayisi yakho kusekelwa. Hlola ngaphezulu >>
Lokhu isipele Android ne ukubuyisela hlelo ukufunda kuphela ngokuphelele software. Ngeke ugcine, shintsha noma avuze noma iyiphi idatha kudivayisi yakho noma ifayela yokusekelayo. Sithatha idatha yakho siqu futhi akhawunti sina. Uneminyaka njalo kuphela umuntu ongakwazi ukuyifinyelela.
Buyisela Idatha esuka Backup Amafayela
Njengoba for amafayela yokusekelayo, ungakwazi ukuhlola kuqala bese ukhetha idatha ofuna ukubuyisela. Ngaphezu kwalokho, ungase futhi abuyisele idatha isipele kwenye idivayisi kudivayisi yakho.
Ubuyisele idatha kumadivayisi yakho Android kalula.
100% Ezokuphepha Isiqinisekiso
It kuphela ofunda idatha, ayikho idatha engozini.
Kuyinto atholakale kuwo wonke umuntu, ebuzwa akukho ulwazi tech.
Ayikho ukulahleka kwedatha
Ayikho idatha elahlekile ngesikhathi isipele, ukuthekelisa noma buyisela.
Android Data Isipele nokubuyisela esimweni Imisebenzi for Iningi Amadivayisi Android
HLOLA THE Imininingwane MODEL uhlu lwamadivayisi asekelwayo >>
idatha Isicelo (amadivayisi ibangelwa)
Android 6.0 futhi wangaphambili
isipele idatha Android ne ukubuyisela iwumkhiqizo ezinhle kakhulu Yangihlaba umxhwele kuningi belulekwa kakhulu kimi lapho Ngiyambonga wayeyisazi onesifo kwasungulwa wena wonke ukwazisa kanye ngiyabonga.
Isebenza kahle kakhulu!
Lolu hlelo wangivumela ukuba ugcine eziningi izinkumbulo ezinhle!
Kuyinto helpfull ngakho mina isipele idatha yami ye-Android.
Isipele Samsung Auto
Kuhle-Android Backup extractor futhi Isipele Isixazululo
Samsung Isipele se-akhawunti: Konke Okufanele Uzazi
Top 12 Kuhle Android Backup Izinhlelo ze-2016
Top 10 Samsung Google Isipele Services
Umhlahlandlela egcwele Buyisela Ucingo Android
5 Izindlela Backup Android App App Data Kalula
5 Izindlela Backup Android ku-PC Kalula
Top 9 ewusizo kakhulu Samsung Isipele Softwares
Phinda wedatha esusiwe noma ilahleke kusuka Amadivayisi Android 6000+.